चाइनिज भर्सेस इन्डियन-भावसागर घिमिरे
We Love Nepal- Sudikshya Bhatta
नागपञ्चमी: महत्त्व र विशेषता: ज्योतिष पण्डित राजेन्द्र खनाल
हामी नेपाललाई माया गर्छौँ-- सुदक्षिणा भट्ट
We Love Nepal-- Saragam Gadal
Nepal: A Place to Love- Rewa Basnet
Why I love my country Nepal--Prasanna Karki
I love Nepal - Ananya Maharjan
WE LOVE NEPAL- Akriti Poudel
The Wonderful Nepal-- Aayam Luitel
ओली सरकारका सकारात्मक पक्ष
''कमजोर धरातलमा गठबन्धन " --निशा अर्याल
पुस्तक प्रकाशन यात्रा- बिजय भुसाल
पशु लोकतन्त्र जिन्दाबाद (रहँदा-बस्दा)- सर्बज्ञ वाग्ले
नवबर्षको आब्हान - निशा अर्याल
महिला हिंसा न्यूनीकरणमा चुनौती -अधिवक्ता सरिता थापा
नेपाली राजनीतिका चरित्रिक विशेषताहरू--डा. टीकाराम पोखरेल
आधा आकाश- महिला हिंसा विरुद्धमा हाम्रो ऐक्यबद्धता - निशा अर्याल
अमेरिकामा नेपाली बिमा आतङ्क--शरद पोखरेल
महाशिवरात्रीको महत्त्व र विशेषता--ज्योतिष पण्डित राजेन्द्र खनाल
पुनर्निर्माणमा मानव अधिकारमुखी पद्धति -डा. टीकाराम पोखरेल
ज्ञान र प्रेमको पूजा--विजयराज शर्मा
अमेरिका र यसको सङ्क्षिप्त जानकारी -प्रकाश श्रेष्ठ
अमेरिकाको नेपाली समाजमा आएका केही चुनौतीहरू- अग्नी चौलागाइ
भ्यालेन्टाइन्स्-डे- पीताम्बर पाण्डेय
पत्रकारिता: भ्रम र वास्तविकता--लक्ष्मणदत्त पन्त
विद्वान बन्न पिएच डि गर्नै पर्छ भन्ने छैन--सरोज खड्का युएई
अमेरिकामा व्यवसायका गर्नकालागि १० मूलमन्त्रहरू--सानुबाबु सिलवाल
अमेरिकामा ग्यास स्टेसन र कन्भिनियन्स स्टोरको इतिहास- सानुबाबु सिलवाल
जीवन बिमाको विषयमा दुईचार कुरा--गोविन्द गिरी प्रेरणा
'वाइटूके बग' आतङ्क र' मिलिनियम बेबी'--रामचन्द्र भट्ट
नयाँ शक्तिको बहस--सुरेन्द्र रेग्मी, टेक्सास
१३ हजार २ सय ४६ -भोला आचार्य
आदिम युगतिर नेपाल--अनिल पाण्डे
प्रवासमा नेपाली पत्रकारिता-- नारायण श्रेष्ठ
अमेरिकामा बस्नखान अत्यन्तै सुलभ र सस्ता १० राज्यहरू--सानुबाबु सिलवाल
उत्तेजना फैलाउने काम नगरौं ,सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ--डा . रबिन्द्र पाण्डे 'समीर' जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ
कर्नाली व्लुजबारे केही कोर्दा---शरद पोखरेल
स्वदेश प्रेम-- निशा अर्याल
जय नेपालको नाराले--सर्बज्ञ वाग्ले
अघोषित धार्मिक युद्ध: नेपाल रणभूमि--विशाल शाह
दुख कस्तो हुन्छ पहाड गएर हेर!--सुनिल मणि दाहाल
वेखुशीको दसैँ--बिटु केसी बराल
अमेरिकामा २ हजार डलरदेखि माथि गर्न सकिने ब्यबसायहरु--सानुबाबु सिलवाल
प्रवासी नेपालीको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नै नेपाल विकाशको आधार हुने--अग्नि चौलागाईं
Why Nepalis Can’t Get Along: A Diagnosis of the Problem-by Deepak Shimkhada
अलिकति स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने कि--डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य बिशेषज्ञ
बदामले फेरिएको जीवनशैली–नवराज बजगाई
संदर्भ- संविधान : आउनुहोस् खुसी बाडौं - तारा बराल
तीजः गोडा पखालेर पानी खाँदैमा पतिको आयु बढ्दैन –मन्दिरा मधुश्री
बिराट नेपाल 2016-02-08
झरीको दिनमा टेम्पोभित्रको यात्रा कस्तो होला ? निक्कै न्यानो थियो । छोरी स्कुल पु्र्याउन लागेका एक अधवैशे मानिस बायाँ तर्फ बसेका थिए, दुई छोरीहरूको साथमा । मेरो अघिल्तिर प्याजी रङ्गको लाहुरे छाता टेकेर ६५ हाराहारीका बाजे पनि बसेका थिए, पल्टनको पेन्सनमा बजेका लाहुरे जस्ता थिए । उनको आडैमा उनकी श्रीमती पनि थिइन्, जाडोमा रातो पच्छ्यौंरा गम्लङ्गै ओढेकी । त्यससँगै अर्का बाजे बसेका थिए, दाँत त थिएनन, हाँस्न चाहिँ मिठो हाँस्थे, खित्का छाडेर । यिनलाई हँसमुख बाजे भनौं ।
कार्यलय जान हतारिएका केही युवाहरू मेरो बायाँ तर्फ थिए, म जस्तै । दश जनाको जत्था शान्तीनगर चोकबाट बानेश्वर हुँदै सुन्धारा आउने तयारीमा थियो, बिहानको ९ बजेर ५ मिनेट जाँदाको समयमा । पानी निरन्तर पर्दै गर्दा टेम्पु स्टार्ट भयो । २५ हाराहारीकी एक बहिनी दौडदै आइन अनि टेम्पुभित्र उक्लिइन् । उनले छाता बन्द गर्ने बित्तिकै त्यसको पानी चुहिएर बाजेको पाइन्ट रुझायो । ‘यसो सर्नुस् है छाताले भिजाउला’ उनले भन्न नपाई हँसमुख बाजेले मुख खोले, ‘छाताले भिजाएपनि पानीले नभिजाए भैहाल्यो केही छैन ।’ सबैको हाँसो छुट्यो । टेम्पु चल्न थाल्यो ।
‘यो छाता मज्जैले टिक्छ, गज्जब हुन्छ,’ हँसमुख बाजेले लाहुरे बाजेको प्याजीरंगको छाता देखाउँदै भने । ‘खै क्यार्छ, चाइनीज न हो,’ लाहुरे बाजेले मुख खोले ।
‘त्यही त भरपर्ने हुन्छ भन्या त,’ हँसमुखबाजे खित्का छाडेर हाँसे, ‘इन्डेन त भन्ने मात्र हो, भरको हुँदैन भन्ने देखिहाल्यो नि ।’
त्यसपछि टेम्पुभित्र सबैको हाँसो गुञ्जियो । -घिमिरेको ब्लगबाट